आधामा तपाईंको ब्लग ट्राफिक कसरी काट्ने Martech Zone
मंगलवार, फेब्रुअरी 24, 2009 आइतबार, जुलाई 27, 2014 Douglas Karr
म surmise छैन कसैले वास्तवमा उनीहरूको ट्राफिकलाई आधा ब्लगमा काट्न चाहान्छ। जे होस्, यो मेरो तथ्या .्कको साथ धेरै मानक हो र मेरो ब्लगमा प्रत्येक दिन ब्लगमा धेरै दबाब दिन्छ।
यदि मैले लगातार आधारमा ब्लग गर्न जारी राखें भने, मेरो ट्राफिक बढ्छ - हरेक महिना लगभग १०० नयाँ आगन्तुकहरू। जहाँसम्म, यदि म एक दिनको लागि ब्लग गर्दिन भने, मेरो ट्राफिक आधा गुम्छ। यो गत हप्ता, म यति व्यस्त भएको छु कि मेरो दैनिक लिंकहरू मेरो सामग्रीको अधिकांश रहेको छ - साथै मेरा एक मिल्ने साथीलाई गुनासो गर्न बाध्य पार्दछ।
मँ सामग्री को अभाव को कारण ब्लग गर्दै छैन, यसैले मैले आफूलाई राम्रो तालमा फर्काउनु पर्छ। अनलाइन मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा बढ्दो प्रगतिमा साझेदारी गर्न मसँग धेरै जानकारीहरू छन् - मलाई मेरो प्रकाशनको म्यादमा थप अनुशासित हुनु आवश्यक छ। वरिपरि रहनुहोस्, म वृद्धिमा फिर्ता छु!
टैग: ब्लगिंगयातायात ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिट्राफिक छोड्नुहोस्
कहाँ एक स्टार्टअप शुरू गर्न?
मलाई यहाँको पारदर्शिता मन पर्छ। म सोच्दछु कि यो कस्तो हुनेछ यदि तथ्याङ्कहरू पृष्ठमा सबै समय प्रदर्शित गरिएको थियो।
मलाई लाग्छ कि यसले व्यक्तिगत ब्लगको तुलनामा उत्पादन पृष्ठहरू र समीक्षा साइटहरूमा मात्र काम गर्दछ। म मानिसहरूलाई तिनीहरूको विचारहरूको कारणले पछ्याउँछु तिनीहरूको तथ्याङ्क होइन। तर यो हेर्न रोचक हुनेछ कि शीर्ष ट्राफिक केटाहरू शीर्ष विचार केटाहरू हुन्।
लयमा आउनु शुभकामना। म यसको साथ साँच्चै संघर्ष गर्छु।
त्यहाँ राम्रो सप्ताहन्त ड्रपअफ। ती दिनहरूमा के भयो जब मानिसहरूले सर्फ गरे र महत्त्वपूर्ण मार्केटिङ ब्लग पोस्टहरू 24/7 पढे! म त्यो प्रवृति विगत धेरै महिनाहरु संग संगत थियो कि भनेर हेर्न इच्छुक हुनेछु।
म एउटै कुरा याद गर्छु। म मात्र गर्न सक्छु? पोस्टिङ प्राप्त गर्नुहोस्! 🙂
हम्म... यो बिल्कुल नयाँ छ, तपाई आधा ट्राफिक कटौती गर्न चाहनुहुन्छ।
मसँग एकदम नयाँ ब्लग छ,
मलाई दिनहुँ धेरै मानिसहरू चाहिन्छ,
यदि तपाईलाई कुनै आपत्ति छैन भने मलाई मानिसहरूलाई रिडिरेक्ट गर्नुहोस्... :))